Wisdom Hill မူကြိုကလေးအမှု ဆရာမနှင်းနုနဲ့ သီးသန့်အင်တာဗျူး - BBC News မြန်မာ
Wisdom Hill မူကြိုကလေးအမှု ဆရာမနှင်းနုနဲ့ သီးသန့်အင်တာဗျူး - BBC News မြန်မာ 4
“ကိုကို လုပ်တယ်လို့ ကျွန်မကို လာ မတိုင်ဘူးရှင့်။”
“အဲဒီ ကိုကို ကိုလည်း ကျွန်မ မဆူ လိုက်ဘူးရှင့်။”
ဆရာမ၊ Wisdom Hill မူကြို
နေပြည်တော် မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ မူကြိုကျောင်း က မုဒိမ်း ပြုကျင့်ခြင်း ခံရသူ ရဲ့ ဆရာမ နဲ့ သီးသန့် မေးမြန်း ထားတာကို ကြည့်ရှု နိုင်ပါပြီ။
ရိုက်ကူး/မေးမြန်း - ကိုအောင်သူရ
#ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း #နေပြည်တော် #မူကြို #သက်ငယ် #မုဒိမ်းမှု
နှင်းနုကိုဖာသယ်မလို့ မပြောကြပါနဲ့ဖာသယ်သိပ်ခါကြတယ်
Author — ကျော်စော ကျော်စော
ဆရာမ ဘဝတစ်လျှောက်လုံး လိပ်ပြာလုံလုံနဲ့
အမြဲတမ်း အိပ်မက်ဆိုး တွေချောက်လှန့်မနေ
ကိုယ်ချင်းစာပါ ။ ဝဋ်ဆိုတာနောင်ဘဝမကူဘူး
Author — lin lin
ပါးစပ်ကသာ အမှန်တရားကိုပဲ ပေါ်စေချင်တယ်လို့ပြောနေတာ စိတ်ထဲမှာကတော့ ငါ့အလိမ်ဘယ်တော့ပေါ်မလဲ ပေါ်မလဲဆိုတာကို ကြိတ်ပြီး စိုးထိတ်နေတာ မျက်လုံး တွေကအသိသာကြီး
Author — Chew Chew
ဒါဆို ကလေးက လိမ်တယ်လို့ ပြောချင်တာ လား? မင်း မရှက်ဘူး လား? မင်းကို ငါ ကျိန်တယ်! ဗစ်တိုရီးယားလေးကို ငါ့ သမီးလို သဘောထားလို့! သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာလို့! မင်း သားသမီး ဆွေစဉ်မျိုးဆက် ၇ဆက်တိတိ မုဒိန်းကျင့်ခံရပါစေ!
Author — David Sar Ka BoulHtoo
ဆရာမလေး အိမ်ထောင်ရှိနေရင် ဒါမှမဟုတ် ရှိလာခဲ့ရင် သမီးလေး မွေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
Author — Kyaw Swar
လိမ်​​နေတဲ့ လူ ပါ ​သေချာတယ်​ မျက်​လုံးကြည့်​ရင်​ သိ ပါတယ်​
Author — Khin Zaw
ကျောင်းချိန်အတွင်း အဲကျောင်းက ဆရာမ ရုပ်က ဖော်ပြနေတယ်နော်
Author — Par YNWA
မဟုတ်သေးဘူး လိမ်နေတာ လိမ်နေတာ လိမ်နေတာ မျက်နှာပြောင်လိမ်နေတာ
Author — Htay Htay Minh
Author — Amber MAK
Author — Naywinn Htun
လီးဆရာမ ​စောက်​မျက်​နှာကပျက်​လို့ သိသာကြီး က​လေးကညာမ​ပြောဘူး
Author — yesornoever yesornoever
ရုပ်ကိုက ကျက်သရေ မရှိဘူး ဗျာ ထွီးး ပြောလိုက်သေးတယ် အမှန်တရားတဲ့ ရွံလိုက်ထှာ 😤😤
Author — John Tay
ဆရာမ နှင်းနုသိတယ်​ ဆရာမ နှင်းနုလိမ်​​နေတာ
Author — ko zaw
Author — အောင် အောင်
Author — Phyomin Aung
စောက်ပေါ်မပြောနှင့် မယုံဘူး အားလုံးလိမ်နေတယ်
Author — ThuYa Lin
ယခုဘဝထက် သံသရာက ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ် သို့သော် သံသရာကို မကြောက်ကြတော့ပါဘူး တစ်ဘဝစာတွေ မခံစားကြပါနဲ့ အရိပ်မဲကြီးက အမြဲခြောက်လှန်နေလိမ့်မယ်နော်
Author — pway pway
အမှန်တရားတွက် အကြောက်တရားတရားက ဖယ်ပေးကြရပါလို့၏ အရှင်ဘုရား
Author — Minzawoo Myanmar
ဗစ်တိုးရီးယားအမှု ဘီဘီစီကရတဲ့ စီစီတီဗီ မှတ်တမ်း - BBC News မြန်မာ
DVB - ဗစ်တိုရီးယားအမှု သုံးသပ်ချက်
ဗစ်တိုးရီးယား အမှု ဆရာမ နှင်းနုကို ထိမ်ချန်မှုနဲ့ တရားရုံးကို လျှောက်- BBC News မြန်မာ
ရသေ့တောင်မှာ အေအေ အဖွဲ့ သောင်းကျန်းပြန်ပြီ
DVB -'ဗစ်တိုးရီးယားရဲ့ မူကြိုကျောင်းထဲ အောင်ကြီး ဘယ်လိုရောက်သွားခဲ့သလဲ?' (မိဘ ပြောကြားချက်)...
မန်တလေးတိုငျး ငါနျးဇှနျမွို့နယျထဲက ကြေးရှာတှရေဲ့ ရဒေုက်ခ - BBC News မွနျမာ